BackGround History » Computer University (Mandalay)
Information of Computer University (Mandalay)
Department of Natural Science (သဘာ၀သိပ္ပံ)
Computer University (Mandalay) was first established as Government Computer College(Mandalay) on February 1, 2002. It was an upgraded to University level on January 20, 2007. The University is located about 2.6 miles east of Yangon-Mandalay Express Road near Nyaung Pin Gyi Village between Paleik Town and SintKaing Town in SintKaing Township of KyaukSe District.
With the guidelines of State Chiefs, main building construction project CU(Mdy) was launched by clearing land and gathering materials in May, 2003. Foundation ceremony on construction of the University building was held on June 27, 2003. Naung Tone Construction Company undertook construction and the task of land-digging were launched with the force of human labor and machine on July 1, 2003. According to the letter of chairman office of State Peace and Development Council dated January 19, 2007, Government Computer College has been upgraded to Computer University (Mandalay) level on January 20, 2007.Computer University (Mandalay) started to open on February 1, 2002. The building type is three-storeyed RC and concreting was launched on July 7, 2003. It is U shape building 569 feet long and 313 wide, which has total floor area 144567 sq ft. Each floor is 14 ft high and total height is 56 ft6inch. There are 48 rooms which have 40×30ft in this university building.
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) ၂၀၀၂ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ(၁)ရက်နေ့ တွင် စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပါသည်။ အဆောက်အဦ အမျိုးအစားမှာ သံကူကွန်ကရစ်(၃)ထပ် အဆောက်အဦ ဖြစ်ပြီး၊ (၇.၇.၂၀၀၃)တွင် ကွန်ကရစ်လောင်းခြင်းလုပ်ငန်း စတင်ခဲ့ပါသည်။ အဆောက်အဦ မှာ အလျား (၅၆၉)ပေ၊ အနံ (၃၁၃)ပေ ရှိပြီး၊ ကြမ်းခင်းဧရိယာစုစုပေါင်းမှာ (၁၄၄၅၆၇)စတုရန်းပေ ရှိသော U ပုံစံအဆောက်အဦ ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ထပ်လျှင်(၁၄)ပေ အမြင့်ရှိပြီး၊ စုစုပေါင်းအမြင့်မှာ (၅၆)ပေ (၆)လက်မ ရှိပါသည်။ ၎င်းအဆောက်အဦ တွင် ပေ(၄၀×၃၀)ရှိသော အခန်းပေါင်း(၄၈) ခန်း ပါရှိ ပါသည်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) ပင်မဆောင် တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းအား နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲများ၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ ၂၀၀၃ခုနှစ်၊ မေလမှစ၍ မြေနေရာ‌ရှင်းလင်းခြင်း၊ ပစ္စည်းစုဆောင်းခြင်းများ စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ (၂၇.၆.၂၀၀၃)ရက်နေ့တွင် ပန္နက်တင် မင်္ဂလာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး (၁.၇.၂၀၀၃)ရက်နေ့တွင် စက်အင်အား၊ လူအင်အားတို့ဖြင့် မြေတူးခြင်း လုပ်ငန်းကို စတင်ခဲ့ပြီး နောင်တုံဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ မှ တာ၀န်ယူ တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥက္ကဌရုံး၏ ၂၀၀၇ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၉)ရက် နေ့စွဲပါစာအမှတ်၊ ၀၁/နယက(ဥ)/စ၀-၁အရ၊ အစိုးရကွန်ပျူတာကောလိပ် မှ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) အဆင့်သို့ ၂၀၀၇ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ (၂၀)ရက်နေ့မှ စတင်တိုးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။
The University is located about 2.6 miles east of Yangon-Mandalay Express Road near Nyaung Pin Gyi Village between Paleik Town and SintKaing Town in SintKaing Township of KyaukSe District.
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင် စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ တအုံကျေးရွာ အနီးတွင်တည်ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်-မန္တလေး အဝေးပြေး လမ်းမကြီးမှ (၂)မိုင်(၆)ဖာလုံ ကွာဝေးပါသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာအကျယ်အဝန်းမှာ (၁၃၈.၀၇) ဧက ရှိပါသည်။
List of Principal Officers of CU (Mandalay) Predecessors
2001 Year Daw Than Nwe Aung Lecturer (Principal)
2002 Year Daw Mya Thidar Kyaw Lecturer (Principal)
2004 Year Daw Mya Thet Saw Lecturer (Principal)
2004 Year Dr. Thandar Thein Temporary Principal
2007 Year Dr. Than Naing Soe Temporary Principal
2008 Year Dr. Win Aye Rector
2016 Year U Kyaw Zwa Soe Rector to Now
Copyright © 2016 Computer University (Mandalay). All Rights Reserved.